Kedu ihe na-eme n'ahụ anyị mgbe anyị na-a appleụ apụl cider mmanya kwa ụbọchị? - AHUIKE KWURU MAG - TELES Relay
Kedu ihe na-eme n'ahụ anyị mgbe anyị na-a appleụ apụl cider mmanya kwa ụbọchị? - AHUIKE tinye MAG
Apple cider mmanya bụ ihe a na-agwọ ọrịa a ma ama maka ọgwụ ya nke a na-akpọkwa "elixir nke ntorobịa", n'ihi ọtụtụ uru ọ bara na ahụ. Njirimara ahụike nke apụl cider mmanya na-eme ka ihe a bụrụ ọgwụ antimicrobial na-enweghị atụ na antioxidant na ekele nke acetic acid ọ nwere nke na-enye ya isi ísì ụtọ na uto uto.
1. Ọ ga-alụ ọgụ megide nje
A na-eji apple cider mmanya mee ihe maka ọtụtụ puku afọ iji gwọọ ọrịa. Ya antibacterial omume ọma, apụl cider mmanya na-ezuru ha, ebe ọ bụ na a ọmụmụ na-enye ohere iji gosipụta na akụrụngwa a ga-enwe ọrụ antimicrobial megide nje dị ka Escherichia coli na candida albicans, na-egbochi ha ịmalite na imebi nri.
2. Ọ nwere ike belata shuga dị n'ọbara ma gwọọ ọrịa shuga
Isdị shuga nke shuga na-arịa shuga dị n'ọbara. N'okwu a, a na-atụ aro ka ị zere carbohydrates nụchara anụcha na shuga. Apple cider mmanya nwere ike, dị ka otu si kwuo search meziwanye insulin na enyemaka belata ọbara shuga mgbe ị risịrị nri ma enwere ike iwere dị ka ngwa ọrụ na-atọ ụtọ iji melite njikwa glycemic, dị ka ekwuru n'ime ya ọmụmụ.
3. Ọ nwere ike inyere aka na ọnwụ
Apple cider mmanya nwere ike inyere aka na ọnwụ. Isi mmalite: nwanyi na aru oru
Ekele maka ihe omume proteolytic na emulsifying ya, apụl cider mmanya nwere ike inye aka belata ibu n'oge nri nri. Ọ digest protein na mmemmem mbibi nke abụba, dị ka gwara Julien kaibeck, aromatherapist na onye ode akwukwo nke “Bien être au naturel”. Na mgbakwunye, a ọmụmụ on 175 obese people chọpụtara na kwa ụbọchị oriri nke apụl cider mmanya n'ihi na arọ ọnwụ ga-eji a Mbelata abdominal abụba na ibu ọnwụ. N’agaghị echefu na a search kwubiri na mgbakwunye na ihe a nwere ike ịkpalite satiety ma duga n'iji obere calorie, nke ga-eduga n'ịdị nha.
4. Ọ ga-echebe ahụike obi
Achọpụtala apple cider mmanya iji belata ihe ize ndụ nke ọrịa obi ma gosipụta na ọ nwere ike belata ihe ndị a dị egwu, ọ bụ ezie na imirikiti ihe ọmụmụ ndị a emeela na ụmụ anụmanụ. A ọmụmụ e mere ya iji gosipụta na acetic acid nwere ike ịbụ ihe ngwọta megide cholesterol ma belata ogo nke cholesterol na triglycerides na oke.
5. Ọ nwere ike melite ahụike nke anụ ahụ
Dị ka otu ọgwụgwọ si n'aka nne nne, ihe mejupụtara apụl cider mmanya na-enyere aka mee ka anụ ahụ dị ọcha ma gbochie mbufụt nke ihe otutu etuto. Ọ bụghị ihe ndabara na onye na-eme ihe nkiri Scarlett Johansson mere ọgwụgwọ a ama maka ezughị okè anụ ahụ. Otú ọ dị, ọ na-atụ aro iji ya diluted na mmiri 50/50 ụtụtụ na mgbede iwepu etuto na ntụ ojii. O nwere ike si otú a meziwanye ihe mgbochi akpụkpọ ahụ na gbochie ọrịa, ọ bụ ezie na a chọkwuru ọmụmụ ihe iji gosipụta ịdị irè nke usoro ọgwụgwọ a.
Kedu ihe ndị ọzọ eji eme ihe maka apụl cider mmanya?
Na mgbakwunye na ọdịnaya nke acetic acid, mmanya a nwekwara acids dị mkpa na enzymes, yana ọdịnaya nke mineral dị ka potassium. Ọ ga-agbazi acid-isi nguzozi nke ahu na-eme dị ka antiseptik na antibacterial.
Christelle nwụrụ, naturopath, na-akọwapụta apụl cider mmanya nwere ike ịbụ ihe ngwọta maka oyi, nsogbu ọbara na eriri afọ, ọbara mgbali elu, nsogbu ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ, nkwonkwo ma ọ bụ akwara mgbu yana ahụhụ ụmụ ahụhụ. Ọ ga-emekwa ka mgbu na nkwonkwo akwara belata yana ụjọ na-atụ gị tupu ụra.
Onye ọkachamara ahụ na-agbakwụnye na na sitz bath, apụl cider mmanya nwere ike ịkwụsị ihe mgbu ma ọ bụ ọzịza na hemorrhoid ma mee ihe banyere mgbasa ọbara na akwara ọbara.
Apple cider mmanya nwere ike imeziwanye ogo ntutu. Isi mmalite: lejournaldesfemmes
Na ihe ịchọ mma, na mgbakwunye na uru nke apụl cider mmanya na anụ ahụ, ọ ga-abụkwa isi ntutu isi maka melite ogo ntutu ma mee ka ha dị ka ndị na-enwu gbaa. N'ihi ya, ọ ga-abụ ọgwụgwọ maka mmanu mmanu ma ọ bụ iji kpochapụ dandruff ma belata ntutu isi. Olee otú iji kwadebe ya? Naanị jikọta otu ụzọ n'ụzọ atọ nke apụl cider mmanya na 1/3 mmiri ma tinye na ntutu isi mgbe ịsachara ntutu na-enweghị ịsachasị. Ọ na-eme ka mmetụta nke nzu nzu na-eme ka ntutu dịkwuo nro.
Ogologo oge ole ka apụl apụl mmanya na-agwọ ọrịa?
Dị ka naturopath si kwuo, ọgwụgwọ ahụ ekwesịghị ịdị karịa izu 3 ma ọ bụ ọnwa 1. Enwekwara ike iri apụl cider mmanya mgbe ụfọdụ ma a bịa na nsogbu ahụike.
A ghaghị ilebara anya, Otú ọ dị, dị ka na-ewe apụl cider mmanya na nnukwu ego na ogologo oge nwere ike na-emerụ n'ihi enamel ezé ma mee ka ọkụ na afọ na akpịrị ma ọ bụ ọbụlagodi akpụkpọ ahụ ma ọ bụrụ na etinyere ya na mpaghara, ka naturopath na-ekwu. Dị nnọọ ka ị drinkingụ ihe ọ thisụ thisụ a na-atọ ụtọ contraindicated bụrụ na nke afọ ọnya afọ, gastritis ma ọ bụ gastroesophageal reflux.
Ntụziaka na galik, apụl cider mmanya na mmanụ a honeyụ na-alụ ọgụ shuga na ọrịa ndị ọzọ
Nkwadebe a na-enyere aka ịlụ ọgụ megide ọrịa shuga, oke ibu na nsogbu metụtara mgbaze. The flagship Efrata nke ọgwụgwọ a bụ onye ọzọ karịa garlic, apụl cider mmanya na mmanụ a honeyụ.
Gịnị kpatara galik na mmanụ a honeyụ?
Garlic nwere ihe na-arụ ọrụ nke na-enyere aka ịchịkwa ọgwụ insulin ma belata ọbara. Dị ka ihe akaebe, nke a ọmụmụ na vivo na-eme ka o kwe omume ịgba akaebe na sọlfọ ahụ nwere nri na-egbochi ndị na-egosi ọrịa shuga na oke. Ezigbo ihe mere iji tinye nri a na nri anyị kwa ụbọchị.
Mmanụ aeyụ bụ onye enyemaka nke usoro nsị, n'ihi enzymes ya nke na-eme ka nri na-edozi ahụ yana eriri afọ.
Esi kwadebe usọbọ a?
Ya mere, ị ga - achọ:
Otu iko apụl cider mmanya
10 akwukwo nri galik
Otu iko mmanụ a pureụ dị ọcha
Gwakọta ihe niile dị na grinder ruo mgbe ị ga-enweta mmiri mmiri na-agbanwe agbanwe. Wunye nkwadebe a n'ime iko iko ị ga-ahapụ na friji. Kwa ụtụtụ na afo efu, na-a tablespoụ tablespoons abụọ nke nkwadebe a. Will ga-ahụ nsonaazụ dị irè n'oge ụbọchị ole na ole mbụ ị na-ewere ọgwụgwọ a.
A naghị atụ aro galik n'oge ọgwụgwọ anticoagulant ma ọ bụ mgbe a wachara ya ahụ. A ga-ezere Apple cider mmanya ma ọ bụrụ na nsogbu nke afọ.
Edemede a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/quarrive-t-il-au-corps-lorsque-nous-buvons-du-vinaigre-de-cidre-de-pomme-tous-les-jours /
HAMADAI afunguka kilichoivunja THE MAFIK / Chanzo, Kumchukua CHRIS BROWN / SHILOLE na UCHEBE / ni KIFO - Video
Oge awa ikpeazụ nke Omar Bongo Ondimba - Jeune Afrique